Ogaden News Agency (ONA) – Waxqabadkii Urur-Waynaha OYSU Mudadii uu Dhisnaa
Posted by ONA Admin	/ May 20, 2013
Halganka Ogadenia lagu xoraynayo waa mid soo jireen ah kaasoo dabasocda halgamadii kahoreeyay. Waa halganka qori isu dhiib ah oo lagu Xoraynayo Dalka & Dadka Ogadenia lagana xoraynayo Gumaysiga Itoobiya ee dulmiga kuhaysta wadanka Ogadenia. Dhalintu waa mustqabalka barri waana kuwa waxna dhisi kara waxna dumin kara. Hadaba Ururka Dhalinta iyo Ardayda Ogadenia ee (Ogaden Youth and Students Union OYSU) waxay tahay ujeedadooda oogu wayn eey higsanayaan siday Ogadenia ugaadhsiin lahaayeen xoriyad taam ah oo lagu wada naaloodo mustaqbalka Haduu eebuhu yiraahdo.
Hadaba tan iyo intii lagu aas aasay 27 June, 2010 wadanka Denmark, urur waynaha OYSU oo kulmiyay urur hoosaadyo faro badan oo kajiray daafaha aduunka ayaa siwanaagsan looga dareemay waxqabadka & abaabulka uu ururku kusoo kordhiyay guud ahaan halganka gobanimo doonka Ogadenia.
Ururweynaha – OYSU- wuxuu mideeyay dhamaan dhalinyarada iyo ardeyda somalida Ogadenia. Waxaana meesha lagasaaray magacyadii faraha badnaa ee dhalinyarada somaalida Ogadenia ku howl gali jireen sanadyadii 2006–2009 siloo helo awood midaysan oo katurjumaysa dhalinyarada Somalida Ogadenia waxay qaadatay waqti adag iyo maal in loohurro taasoo lagu guulaystay fadliga Ilaahay iyo dadaal badan oo lagaliyay.
Ujeedooyinka oogu waynaa ee loosameeyay urur waynaha OYSU waxaa kamid ahaa; midaynta urur hoosaadyada kajiray meelo farabadan oo aduunka ka mid ah, kobcinta Wacyiga siyaasiga ah ee la xidhiidha fahamka halganka, midaynta fikirka, dareenka iyo itaalka dhalinyarada & ardayda udhalatay Somalida Ogadenia. Sido kale, gadhsiinta beesha caalamka xasuuqa & xadgudubyada joogtada ah ee ka socda gudaha Ogadenia, usamaynta saaxiibo taageera qadiyada Ogadenia, kasbashada muwaadiniinta udhashay dalalka xorta ah eey jaaliyaadka Somalida Ogadenia kudhex-nool yihiin, kubeerida dhalinyarada dareen dal & dad jacayl ku qotoma iyo ucarbinta dhalinta masuuliyadda lama huraanka ah ee mustaqbalka sugaysa.
Dhanka kale wuxuu ururka OYSU siwanaagsan oo tayo & itaal wanaagsan leh ooga dhex muuqday maxfallo badan oo aduunka kamid ah iyagoo kusoo bandhigay barnaamij & xog aad ufara badan oo kahadlaya qadiyada Ogadenia. Wuxuu ururka OYSU kaqaatay kaalin wanaagsan xoojinta & waxqabadka jaaliyaadka Ogadenia ee ka hawlgala daafaha aduunka.
Urur waynaha OYSU wuxuu qabtay shirar, siminaarro iyo munaasabado badan oo isugu jira kuwo lagu soo bandhigayo xuquuqul insaanka Ogadenia iyo abaabulka bulshada oo kadhacay meelo kala duwan oo aduun waynaha kamid ah. Tan iyo intii ururka OYSU uu jiray waxaa uqabsoomay labo kala fadhi oo caalami ah kuwaasoo siwanaagsan ooga soo qaybgaleen hay’ado kala duwan, suxufiyiin, fanaaniin, siyaasiyiin caan ah iyo waliba madaxda oogu saraysa JWXO oo dadaal badan galiyay siduu urur waynaha OYSU cagihiisa iskugu taagi lahaa isla markaana ooga soobixi lahaa kaalintii loogu talogalay.
Waxaa xusid mudan in wadanka Maraykanka gaar ahaan magaalada San Diego ee gobolka California lagu qaban doono 22 May, 2013 kalfadhigii sadexaad ee urur waynaha OYSU. Shirkan oo lagu qiimayn doono waxqabadkii ururka mudadii uu jiray iyo isbaddallada ladoonayo in laxaqiijiyo mustaqbalka isla markaana lagu dooran doono Xoghaye cusub oo hogaamin doona ururka sadaxda sano ee soo socota haduu eebuhu yiraahdo. Waxaa kasoo qaybgali doona shirkan ergooyin fara badan kuwaasoo ka kala imaan doona aduun waynaha oo idil waxaa hormuud u,ah kaqaybgaleyaasha shirkan madaxda oogu saraysa JWXO.
Waxqabadka OYSU ayaa baal dahabi ah kagalay taariikhda halganka Ogadenia eey JWXO hormuudka utahay iyagoo qayb libaax kaqaatay fashilinta iyo ladagaalanka siyaasadda iyo ajendeyaasha gumaysiga Itoobiya ee saama laluudka ah. Hogaaminta kala duwan ee Urur- weynaha OYSU waxaa lagu xasuusandoonaa hirgalinta iyo diyaarinta barnaamijyo laf- dhabar unoqday midayntii Dhalinyarada iyo Ardeyda Somaalida Ogadenia .